ထရမျ့ နဲ့ ဘိုငျဒငျ ဘာလဲ....ဘယျလဲ..... - Pyit Time Htaung
Homepage / World News / ထရမျ့ နဲ့ ဘိုငျဒငျ ဘာလဲ....ဘယျလဲ.....
ထရ မျ့က သူ့ဘဝ တဈလြောကျလုံး မိနျးမပြိုေ လးတှကေို မတျောမတ ရားလုပျ တာ နံမညျကွီး ပါတယျ။ သူ့ဘဝတဈေ လြာကျလုံး တိုငျးပွညျအတှကျ ဘာမှ လုပျခဲ့တဲ့သူ မဟုတျပါဘူး။ ဗီယကျနမျစဈပှဲမှာ စဈမှုမထမျးမနရေ ဥပဒကေို အကွောငျးအ မြိုးမြိုးပွပွီး စဈထဲမဝငျဘဲ ရှောငျတိ မျးလာခဲ့တဲ့သူ။ အကွံအဖနျနညျးမြိုးစုံနဲ့ သူ့အတှကျသူဘဲ ခမျြးသာအောငျ လုပျခဲ့တာပါ။ သူ့ကုမ်ပဏီဟာ ဒဝေါလီအကွိမျကွိမျ ခံခဲ့ရပါတယျ။ အခုလညျး သူ့ကွောငျ့ တိုငျးပွညျ ခြောကျထဲကနြပေါပွီ။ သူ့ရဲ့ ကိုငျတှယျပုံ ညံ့ဖငျြးလို့ လူပေါငျး ၂သိနျးကြျော သခေဲ့ရပွီးပါပွီ။
သူသာကောငျးကောငျး ကိုငျတှယျနိုငျခဲ့ရငျ ဒီလောကျ သစေရာအကွောငျးမရှိပါဘူး။ ကိုရီးယားတို့ ဂပြနျတို့မှာ ထောငျဂဏနျးဘဲ သပေါတယျ။ အခု ဒုတိယလှိုငျးပွနျဖွဈလို့ ကူးစကျမှုတှေ စံခြိနျတငျဖွဈပှားနတောကို ကိုးဗဈကို အဆုံးသတျနိုငျခဲ့ပွီလို့ ပွောငျပွောငျတငျးတငျး လိမျညာပွီး မဲဆှယျနပေါတယျ။ ထမငျးစားတဲ့သူတှကေတော့ သူ့ရဲ့ မိုးလုံးပွညျ့ မုသာဝါဒတှကေို မယုံကွတော့ပါဘူး။ လူစိတျရှိတဲ့ အမရေိကနျအမြားစုက သူ့ကို ဆနျ့ကငျြနကွေတာ တျောတျော အားရဖို့ ကောငျးပါတယျ။ ကနြော့ စကားကို မှတျထားလိုကျပါ။
ဒီရှေးကောကျပှဲမှာ ဘိုငျဒနျက တောငျပွိုကမျးပွို နိုငျရုံသာမက ဆီးနိတျရော၊ ကှနျဂရကျပါ ဒီမိုကရကျတှေ ပွနျပွီးထိနျးခြုပျနိုငျပါလိမျ့မယျ။ ထရမျ့မိသားစုကို ထောငျထဲထဲ့မလားဆိုတာကတော့ စောငျ့ကွညျ့လိုကျပါ။ မူလာ အစီရငျခံစာမှာ ထရမျ့က သမ်မတဖွဈနလေို့ အရေးမယူနိုငျဘူးလို့ တငျပွထားပါတယျ။ သူသမ်မတ မဟုတျတော့ဘူးဆိုတာနဲ့ အမှုတှေ အမြားကွီး တကျလာမှာပါ။ နယူးယောကျမှာလညျး ပွညျနယျရှနေ့ခြေုပျက ထရမျ့မိသားစုကို စုံစမျးစဈဆေးနတော တျောတျောခရီးရောကျနပေါပွီ။ သူသမ်မတ မဟုတျတော့တာနဲ့ ထောငျထဲထဲ့လို့ ရနပေါပွီ။ တဈခုဘဲရှိပါတယျ။ ဘိုငျဒနျက ပါတီ ၂ခုလုံးနဲ့ လကျတှဲလုပျခငျြလို့ ရငျကွားစရေ့ေးအတှကျ သူ့အပျေါ ခှငျ့လှတျလိုကျရငျတော့ သူသကျသာမှာပါ။ ထရမျ့အတှကျ နောကျဆုံးနတှေ့ကေ လကျခြိုးရလေို့ ရနပေါပွီ။
ထရမျ့ထကျ ဘိုငျဒနျက ဘုရားကို ပိုရိုသပေါတယျ။ ထရမျ့က ကမျြးစာကို ကိုငျပွီး ဘုရားကြောငျးရှမှေ့ာ မဲဆှယျရာမှာသုံးဖို့ ဓာတျပုံရိုကျခငျြတာနဲ့ ငွိမျးခမျြးစှာ ဆန်ဒပွနတေဲ့ ပွညျသူတှကေို အကွမျးဖကျပွီး မကျြရညျယိုဗုံးတှသေုံး ရှငျးလငျးခဲ့ပါတယျ။ တဈကယျက အဲ့ဒီကမျြးစာထဲမှာ ယရှေုသခငျက …သငျ့ရနျသူကိုပငျ ခဈြလော့” လို့ လမျးညှနျထားပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ တနင်ျဂနှနေမှေ့ာ ထရမျ့က rally တှလေုပျပွီး အမုနျးတရားတှေ ဟောနခြေိနျမှာ ဘိုငျဒနျကတော့ သူနတေဲ့ မွို့ကလေးမှာ ဘုရားကြောငျးတကျခဲ့ပါတယျ။ မကျြမှနျစိမျးတှေ ခြှတျပွီး သခြောကွညျ့ရငျ အမှနျကိုမွငျလာမှာပါ။ ရရှေုသခငျကို ကားစငျတငျတော့ သခငျရရှေုက အဖဘုရားကို တိုငျတညျတာလေးကို သိပျကွိုကျပါတယျ။
”Please forgive them, cause they don’t know what they are doing… ဆိုတာလေးပါ။
ဘုရားသခငျ ခှငျ့လှတျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးပါတယျ။
ဘိုငျဒနျကို အသကျကွီးပွီး မှတျဉာဏျမကောငျးသလိုမြိုး ထရမျ့က ပုံဖျောနတောပါ။ တဈကယျတနျး မှတျဉာဏျမကောငျးတာက ထရမျ့။ သူအခုပွောထားတဲ့ စကားကို ခနနကြေ မမှတျမိတော့ဘဲ ပွောငျးပွနျပွောပါတယျ။ လူတှကေ သူ့ကို လိမျပွောတတျသူကွီးလို့ ထငျနကွေတာ။ တဈကယျတမျးတော့ သူပွောတာကို သူမသှေ့ားပွီး နောကတနရောမှာ အခွအေနကွေညျ့ပွီး ပွောလိုကျတာ အရငျပွောထားတာနဲ့ ပွောငျးပွနျဖွဈသှားတာပါ။
ဘိုငျဒနျ ကတော့ သူဘာတှေ လုပျခဲ့တယျဆိုတာ သိပျမကွှားတတျပါဘူး။ တဈကယျက သူ လုပျခဲ့တာတှေ အမြားကွီးပါ။ အိုဘားမား ဒုသမ်မတ အနနေဲ့ အဲ့ဒီအခြိနျက အမရေိကနျစီးပှားရေး ကနြတောကို နာလံထူဖို့ 800 Billions Stimulus project ကို သူကွီးကွပျပွီး လုပျခဲ့တာပါ။ အိုဘားမား ဘိုငျဒနျ အစိုးရလကျထကျ နောကျဆုံး ၃နှဈမှာ ကိုးဗဈမဖွဈခငျ ထရမျ့လကျထကျ ပထမဆုံး ၃နှဈ ထကျ လူပေါငျး ၁.၈ သနျးပိုပွီး အလုပျရပါတယျ။ မှတျတမျးတှမှော ရှာပွီး ဖတျကွညျ့ပါ။ ဘိုငျဒနျရဲ့ တိုငျးပွညျအတှကျ လုပျဆောငျခကျြတှနေဲ့ အခုမှ သမ်မတဖွဈခငျြလို့ ထလုပျတဲ့ ထရမျ့လိုလူရဲ့ လုပျဆောငျခကျြတှေ ဘယျလိုမှ နှိုငျးယှယှဉျလို့ မရပါဘူး။ အဲ့ဒါကွောငျ့ ဘိုငျဒနျက လကေုနျခံပွီး မရှငျးတော့တာပါ။
ထရမျ့တို့က ဘိုငျဒနျသားက အကွံအဖနျတှေ လုပျခဲ့တယျဆိုပွီး လုပျကွံဖနျတီးမှုတှကေို နှဈရှညျလမြား ကွိုတငျ ဖနျတီးပါတယျ။ ထရမျ့သာ အဲ့ဒီကိစ်စမှာ ယူကရိနျးကို အကွပျကိုငျမှုနဲ့ Impeachment လုပျခံလိုကျရပါတယျ။ အမရေိကနျသမိုငျးမှာ တတိယမွောကျ လုပျခံရတာပါ။ နှဈပေါငျး ၂၀၀ သမိုငျးမှာ သမ်မတ ၃ယောကျဘဲ အဲ့ဒီလို အရေးယူခံရဘူးတာပါ။
ဘိုငျဒနျကိုတော့ Republican Senate က စုံးစမျးစဈဆေးမှုတှေ လုပျခဲ့ပမေယျ့ ဥပဒနေဲ့ ငွိစှနျးတာမရှိဘူးလို့ ဆုံးဖွတျခဲ့ပါတယျ။ တဈကယျလို့ ဘိုငျဒနျသာ တဈခုခု အနဘယညျးငယျငွိစှနျးခဲ့ရငျ Republican တှကေ ဘိုငျဒနျကို အရိုးတခြား အသားတခြားဖွဈအောငျ ဝိုငျးဖဲ့ပွီးပါပွီ။
ဘာဘဲပွောပွော အခုလကျရှိ အခွအေနမှောတော့ ဘိုငျဒနျက တောငျပွို ကမျးပွိုနိုငျဖို့ သခြောနပေါပွီ။ ဒီရှေးကောကျပှဲဟာ နှဈပေါငျး ၁၀၀မှာ တဈခါသာဖွဈတဲ့ ကပျရောဂါကွီးအတှငျးမှာ ကငျြးပပွီး ကပျရောဂါဆိုးကွီးကနေ ပွညျသူကို အကာအကှယျ မပေးနိုငျဘဲ သူနဲ့ သူ့မိသားစုပါ ကူးစကျခံခဲ့ရတဲ့ သမ်မတကို မောငျးထုတျရတဲ့ပှဲပါ။ ကနြျောကတော့ အဲ့ဒီလို သမိုငျးဝငျ ရှေးကောကျပှဲကွီးမှာ ထရမျ့ကို မောငျးထုတျလိုကျတဲ့ မဲတှထေဲမှာ ကနြော့ရဲ့ မဲတဈမဲပါသှားပွီ ဖွဈတဲ့အတှကျ အရမျးဂုဏျယူပါတယျ။ သားစဉျမွေးဆကျ လကျဆငျ့ကမျးပွောပွသှားရမယျ့ ကိစ်စတဈခုပေါ့ဗြာ။
အိုဘားမားတကျတဲ့ ၂၀၀၉ မှာ ဂြော့ဘုရဲ့ Tax cut policy နဲ့ အီရတျ အာဖဂနျစဈ စရိတျတှကွေောငျ့ Great Recession ဖွဈနပေါတယျ။ သူလုပျလို့ ဖွဈတာမဟုတျပါဘူး။ အလုပျလကျမဲ့က ၁၁% ထိထိုးဆငျးသှားပွီး စတော့မားကကျကလညျး Dow က ၆၅၀၉ ထိကသြှားပါတယျ။ အဲ့ဒီအခွအေနကေို အိုလယဘားမားက အမှခေံရတာပါ။ Republican တှကေို အော့နှလုံးနာနတေဲ့ ပွညျသူတှဟော အိုဘာမားနဲ့ အတူ Senate ရော၊ Congress ရောကိုပါ ဒီမိုကရကျတှကေို ပုံအောပေးခဲ့ပါတယျ။ Senate မှာဆိုရငျ ဒီမိုကရကျတှကေ Super Majority. တောငျရခဲ့ပါတယျ။ ဒါဟာ အမရေိကနျသမိုငျးမှာ ဖွဈတောငျ့ဖွဈခဲပါ။
အဲ့ဒီမှာ အိုဘားမားတို့က 800 Billion Stimulus package ကို အတညျပွုပွီး စီးပှားရေးကိုပွနျတညျဆောကျခဲ့ပါတယျ။ ဂြော့ဘုလကျထကျက စခဲ့တဲ့ စီးပှားပကျြကပျက ဘယျလောကျဆိုးသလဲ ဆိုရငျ New York မှာ Wall Street က တဈခြို့သူတှေ တိုကျပျေါက ခုနျခပြွီး ကိုယျ့ကိုယျကို သတျသတေဲ့သူတှတေောငျရှိပါတယျ။ အိမျခွံမွဈေေးကှကျကွီးလညျး ပွိုလဲခဲ့ပါတယျ။ အိုဘားမားနဲ့ ဘိုငျဒနျ တျောတျောလုပျယူခဲ့ရတာပါ။ ဒါအပွငျ Affordable Care Act လို့ ချေါတဲ့ Obamacare ကိုပွဌာနျးပွီး ဆငျးရဲသား သနျး ၂၀ ကို Health Insurance. အလကားနီးပါးနဲ့ ပေးပါတယျ။ သူဌေးတှကေိုတော့ အခှနျတိုးကောကျပါတယိ။
ဒါ့ကွောငျ့ လူဖွူ သူဌေးကွီးတှကေ အိုဘားမားကို အသမေုနျးပါတယျ။ အိုဘားမားနဲ့ ဘိုငျဒနျလုပျဆောငျမှု မှနျကနျတဲ့ အတှကျ စီးပှားရေးတှေ တဈစတဈစပွနျတကျလာပွီး အလုပျလကျမဲ့လညျး တဈဖွေးဖွေးနညျးလာပါတယျ။ စတော့မားကကျလညျးပွနျတကျလာတာ ၆၅၀၀ ကနေ ၁၈၀၀၀ လောကျအထိ ၃ဆနီးပါးဖွဈလာပါတယျ။ ထရမျ့ဟာ အဲ့ဒီအရှိနျနဲ့ ဆကျပွီး လဟေုနျစီးခဲ့တာပါ။ စာရငျးတှကေို ပွနျကွညျ့ရငျ အိုဘားမား ဘိုငျဒနျ နောကျဆုံး ၃နှဈမှာ ဖနျတီးခဲ့တဲ့ အလုပျအကိုငျဟာ ထရမျ့ရဲ့ ပထမ ၃နှဈ ဖနျတီးထကျအလုပျထကျ ၁.၈သနျးပိုပါတယျ။ သူဆကျခံတဲ့ လုပျငနျးတှကေို ဖကျြဆီးပွဈတတျတဲ့
ထရမျ့ ရဲ့ ထုံးစံအတိုငျး အခုတော့ လူပေါငျး သနျးဆယျခြီလို့ အလုပျလကျမဲ့ ဖွဈခဲ့ရပါပွီ။ ထရမျ့ရဲ့ ကာစီနိုလုပျငနျး အကွိမျ့ကွိမျ ဒဝေါလီခံခဲရသလိုမြိုးပါဘဲ။ တဈကယျသာ သူ့ရဲ့ စီမံခနျခှဲမှုကောငျးခဲ့ရငျ လူပေါငျးသိနျးခြီ သရေစရာမရှိပါဘူး။ ကိုရီးယားကိုကွညျ့ပါ။ အမရေိကနဲ့ တဈခြိနျထဲ First case တှတေ့ာပါ။ အခုထိ ကိုရီးယားမှာ လူ ၂၈၀၀ လောကျဘဲသေ ပါသေးတယျ။ အမရေိကမှာ လူပေါငျး ၂၂၈၀၀၀ ကြျောသပွေီးသှားပါပွီ။ ဘယျသူ့ကိုမှ လကျညိုးထို အပွဈတငျလို့ မရပါဘူး။ ကမ်ဘာပျေါမှာ အာဏာအရှိဆုံး ရာထူးကို ယူထားတဲ့ သမ်မတ ထရမျ့မှာ တာဝနျအပွညျ့အဝရှိပါတယျ။
ထရ မ့်က သူ့ဘဝ တစ်လျောက်လုံး မိန်းမပျိုေ လးတွေကို မတော်မတ ရားလုပ် တာ နံမည်ကြီး ပါတယ်။ သူ့ဘဝတစ်ေ လျာက်လုံး တိုင်းပြည်အတွက် ဘာမှ လုပ်ခဲ့တဲ့သူ မဟုတ်ပါဘူး။ ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲမှာ စစ်မှုမထမ်းမနေရ ဥပဒေကို အကြောင်းအ မျိုးမျိုးပြပြီး စစ်ထဲမဝင်ဘဲ ရှောင်တိ မ်းလာခဲ့တဲ့သူ။ အကြံအဖန်နည်းမျိုးစုံနဲ့ သူ့အတွက်သူဘဲ ချမ်းသာအောင် လုပ်ခဲ့တာပါ။ သူ့ကုမ္ပဏီဟာ ဒေဝါလီအကြိမ်ကြိမ် ခံခဲ့ရပါတယ်။ အခုလည်း သူ့ကြောင့် တိုင်းပြည် ချောက်ထဲကျနေပါပြီ။ သူ့ရဲ့ ကိုင်တွယ်ပုံ ညံ့ဖျင်းလို့ လူပေါင်း ၂သိန်းကျော် သေခဲ့ရပြီးပါပြီ။
သူသာကောင်းကောင်း ကိုင်တွယ်နိုင်ခဲ့ရင် ဒီလောက် သေစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ ကိုရီးယားတို့ ဂျပန်တို့မှာ ထောင်ဂဏန်းဘဲ သေပါတယ်။ အခု ဒုတိယလှိုင်းပြန်ဖြစ်လို့ ကူးစက်မှုတွေ စံချိန်တင်ဖြစ်ပွားနေတာကို ကိုးဗစ်ကို အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း လိမ်ညာပြီး မဲဆွယ်နေပါတယ်။ ထမင်းစားတဲ့သူတွေကတော့ သူ့ရဲ့ မိုးလုံးပြည့် မုသာဝါဒတွေကို မယုံကြတော့ပါဘူး။ လူစိတ်ရှိတဲ့ အမေရိကန်အများစုက သူ့ကို ဆန့်ကျင်နေကြတာ တော်တော် အားရဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ကျနော့ စကားကို မှတ်ထားလိုက်ပါ။
ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ ဘိုင်ဒန်က တောင်ပြိုကမ်းပြို နိုင်ရုံသာမက ဆီးနိတ်ရော၊ ကွန်ဂရက်ပါ ဒီမိုကရက်တွေ ပြန်ပြီးထိန်းချုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ထရမ့်မိသားစုကို ထောင်ထဲထဲ့မလားဆိုတာကတော့ စောင့်ကြည့်လိုက်ပါ။ မူလာ အစီရင်ခံစာမှာ ထရမ့်က သမ္မတဖြစ်နေလို့ အရေးမယူနိုင်ဘူးလို့ တင်ပြထားပါတယ်။ သူသမ္မတ မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာနဲ့ အမှုတွေ အများကြီး တက်လာမှာပါ။ နယူးယောက်မှာလည်း ပြည်နယ်ရှေ့နေချုပ်က ထရမ့်မိသားစုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတာ တော်တော်ခရီးရောက်နေပါပြီ။ သူသမ္မတ မဟုတ်တော့တာနဲ့ ထောင်ထဲထဲ့လို့ ရနေပါပြီ။ တစ်ခုဘဲရှိပါတယ်။ ဘိုင်ဒန်က ပါတီ ၂ခုလုံးနဲ့ လက်တွဲလုပ်ချင်လို့ ရင်ကြားစေ့ရေးအတွက် သူ့အပေါ် ခွင့်လွှတ်လိုက်ရင်တော့ သူသက်သာမှာပါ။ ထရမ့်အတွက် နောက်ဆုံးနေ့တွေက လက်ချိုးရေလို့ ရနေပါပြီ။
ထရမ့်ထက် ဘိုင်ဒန်က ဘုရားကို ပိုရိုသေပါတယ်။ ထရမ့်က ကျမ်းစာကို ကိုင်ပြီး ဘုရားကျောင်းရှေ့မှာ မဲဆွယ်ရာမှာသုံးဖို့ ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တာနဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေတဲ့ ပြည်သူတွေကို အကြမ်းဖက်ပြီး မျက်ရည်ယိုဗုံးတွေသုံး ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။ တစ်ကယ်က အဲ့ဒီကျမ်းစာထဲမှာ ယေရှုသခင်က …သင့်ရန်သူကိုပင် ချစ်လော့” လို့ လမ်းညွှန်ထားပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ထရမ့်က rally တွေလုပ်ပြီး အမုန်းတရားတွေ ဟောနေချိန်မှာ ဘိုင်ဒန်ကတော့ သူနေတဲ့ မြို့ကလေးမှာ ဘုရားကျောင်းတက်ခဲ့ပါတယ်။ မျက်မှန်စိမ်းတွေ ချွတ်ပြီး သေချာကြည့်ရင် အမှန်ကိုမြင်လာမှာပါ။ ရေရှုသခင်ကို ကားစင်တင်တော့ သခင်ရေရှုက အဖဘုရားကို တိုင်တည်တာလေးကို သိပ်ကြိုက်ပါတယ်။
”Please forgive them, cause they don’t know what they are doing… ဆိုတာလေးပါ။
ဘုရားသခင် ခွင့်လွှတ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
ဘိုင်ဒန်ကို အသက်ကြီးပြီး မှတ်ဥာဏ်မကောင်းသလိုမျိုး ထရမ့်က ပုံဖော်နေတာပါ။ တစ်ကယ်တန်း မှတ်ဥာဏ်မကောင်းတာက ထရမ့်။ သူအခုပြောထားတဲ့ စကားကို ခနနေကျ မမှတ်မိတော့ဘဲ ပြောင်းပြန်ပြောပါတယ်။ လူတွေက သူ့ကို လိမ်ပြောတတ်သူကြီးလို့ ထင်နေကြတာ။ တစ်ကယ်တမ်းတော့ သူပြောတာကို သူမေ့သွားပြီး နောကတနေရာမှာ အခြေအနေကြည့်ပြီး ပြောလိုက်တာ အရင်ပြောထားတာနဲ့ ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတာပါ။
ဘိုင်ဒန် ကတော့ သူဘာတွေ လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ သိပ်မကြွားတတ်ပါဘူး။ တစ်ကယ်က သူ လုပ်ခဲ့တာတွေ အများကြီးပါ။ အိုဘားမား ဒုသမ္မတ အနေနဲ့ အဲ့ဒီအချိန်က အမေရိကန်စီးပွားရေး ကျနေတာကို နာလံထူဖို့ 800 Billions Stimulus project ကို သူကြီးကြပ်ပြီး လုပ်ခဲ့တာပါ။ အိုဘားမား ဘိုင်ဒန် အစိုးရလက်ထက် နောက်ဆုံး ၃နှစ်မှာ ကိုးဗစ်မဖြစ်ခင် ထရမ့်လက်ထက် ပထမဆုံး ၃နှစ် ထက် လူပေါင်း ၁.၈ သန်းပိုပြီး အလုပ်ရပါတယ်။ မှတ်တမ်းတွေမှာ ရှာပြီး ဖတ်ကြည့်ပါ။ ဘိုင်ဒန်ရဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ အခုမှ သမ္မတဖြစ်ချင်လို့ ထလုပ်တဲ့ ထရမ့်လိုလူရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ဘယ်လိုမှ နှိုင်းယှယှဉ်လို့ မရပါဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့် ဘိုင်ဒန်က လေကုန်ခံပြီး မရှင်းတော့တာပါ။
ထရမ့်တို့က ဘိုင်ဒန်သားက အကြံအဖန်တွေ လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီး လုပ်ကြံဖန်တီးမှုတွေကို နှစ်ရှည်လများ ကြိုတင် ဖန်တီးပါတယ်။ ထရမ့်သာ အဲ့ဒီကိစ္စမှာ ယူကရိန်းကို အကြပ်ကိုင်မှုနဲ့ Impeachment လုပ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ အမေရိကန်သမိုင်းမှာ တတိယမြောက် လုပ်ခံရတာပါ။ နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ သမိုင်းမှာ သမ္မတ ၃ယောက်ဘဲ အဲ့ဒီလို အရေးယူခံရဘူးတာပါ။
ဘိုင်ဒန်ကိုတော့ Republican Senate က စုံးစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ခဲ့ပေမယ့် ဥပဒေနဲ့ ငြိစွန်းတာမရှိဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ကယ်လို့ ဘိုင်ဒန်သာ တစ်ခုခု အနဘယည်းငယ်ငြိစွန်းခဲ့ရင် Republican တွေက ဘိုင်ဒန်ကို အရိုးတချား အသားတချားဖြစ်အောင် ဝိုင်းဖဲ့ပြီးပါပြီ။
ဘာဘဲပြောပြော အခုလက်ရှိ အခြေအနေမှာတော့ ဘိုင်ဒန်က တောင်ပြို ကမ်းပြိုနိုင်ဖို့ သေချာနေပါပြီ။ ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀မှာ တစ်ခါသာဖြစ်တဲ့ ကပ်ရောဂါကြီးအတွင်းမှာ ကျင်းပပြီး ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးကနေ ပြည်သူကို အကာအကွယ် မပေးနိုင်ဘဲ သူနဲ့ သူ့မိသားစုပါ ကူးစက်ခံခဲ့ရတဲ့ သမ္မတကို မောင်းထုတ်ရတဲ့ပွဲပါ။ ကျနော်ကတော့ အဲ့ဒီလို သမိုင်းဝင် ရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာ ထရမ့်ကို မောင်းထုတ်လိုက်တဲ့ မဲတွေထဲမှာ ကျနော့ရဲ့ မဲတစ်မဲပါသွားပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် အရမ်းဂုဏ်ယူပါတယ်။ သားစဉ်မြေးဆက် လက်ဆင့်ကမ်းပြောပြသွားရမယ့် ကိစ္စတစ်ခုပေါ့ဗျာ။
အိုဘားမားတက်တဲ့ ၂၀၀၉ မှာ ဂျော့ဘုရဲ့ Tax cut policy နဲ့ အီရတ် အာဖဂန်စစ် စရိတ်တွေကြောင့် Great Recession ဖြစ်နေပါတယ်။ သူလုပ်လို့ ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အလုပ်လက်မဲ့က ၁၁% ထိထိုးဆင်းသွားပြီး စတော့မားကက်ကလည်း Dow က ၆၅၀၉ ထိကျသွားပါတယ်။ အဲ့ဒီအခြေအနေကို အိုလယဘားမားက အမွေခံရတာပါ။ Republican တွေကို အော့နှလုံးနာနေတဲ့ ပြည်သူတွေဟာ အိုဘာမားနဲ့ အတူ Senate ရော၊ Congress ရောကိုပါ ဒီမိုကရက်တွေကို ပုံအောပေးခဲ့ပါတယ်။ Senate မှာဆိုရင် ဒီမိုကရက်တွေက Super Majority. တောင်ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ အမေရိကန်သမိုင်းမှာ ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲပါ။
အဲ့ဒီမှာ အိုဘားမားတို့က 800 Billion Stimulus package ကို အတည်ပြုပြီး စီးပွားရေးကိုပြန်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဂျော့ဘုလက်ထက်က စခဲ့တဲ့ စီးပွားပျက်ကပ်က ဘယ်လောက်ဆိုးသလဲ ဆိုရင် New York မှာ Wall Street က တစ်ချို့သူတွေ တိုက်ပေါ်က ခုန်ချပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေတဲ့သူတွေတောင်ရှိပါတယ်။ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်ကြီးလည်း ပြိုလဲခဲ့ပါတယ်။ အိုဘားမားနဲ့ ဘိုင်ဒန် တော်တော်လုပ်ယူခဲ့ရတာပါ။ ဒါအပြင် Affordable Care Act လို့ ခေါ်တဲ့ Obamacare ကိုပြဌာန်းပြီး ဆင်းရဲသား သန်း ၂၀ ကို Health Insurance. အလကားနီးပါးနဲ့ ပေးပါတယ်။ သူဌေးတွေကိုတော့ အခွန်တိုးကောက်ပါတယိ။
ဒါ့ကြောင့် လူဖြူ သူဌေးကြီးတွေက အိုဘားမားကို အသေမုန်းပါတယ်။ အိုဘားမားနဲ့ ဘိုင်ဒန်လုပ်ဆောင်မှု မှန်ကန်တဲ့ အတွက် စီးပွားရေးတွေ တစ်စတစ်စပြန်တက်လာပြီး အလုပ်လက်မဲ့လည်း တစ်ဖြေးဖြေးနည်းလာပါတယ်။ စတော့မားကက်လည်းပြန်တက်လာတာ ၆၅၀၀ ကနေ ၁၈၀၀၀ လောက်အထိ ၃ဆနီးပါးဖြစ်လာပါတယ်။ ထရမ့်ဟာ အဲ့ဒီအရှိန်နဲ့ ဆက်ပြီး လေဟုန်စီးခဲ့တာပါ။ စာရင်းတွေကို ပြန်ကြည့်ရင် အိုဘားမား ဘိုင်ဒန် နောက်ဆုံး ၃နှစ်မှာ ဖန်တီးခဲ့တဲ့ အလုပ်အကိုင်ဟာ ထရမ့်ရဲ့ ပထမ ၃နှစ် ဖန်တီးထက်အလုပ်ထက် ၁.၈သန်းပိုပါတယ်။ သူဆက်ခံတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ဖျက်ဆီးပြစ်တတ်တဲ့
ထရမ့် ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း အခုတော့ လူပေါင်း သန်းဆယ်ချီလို့ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရပါပြီ။ ထရမ့်ရဲ့ ကာစီနိုလုပ်ငန်း အကြိမ့်ကြိမ် ဒေဝါလီခံခဲရသလိုမျိုးပါဘဲ။ တစ်ကယ်သာ သူ့ရဲ့ စီမံခန်ခွဲမှုကောင်းခဲ့ရင် လူပေါင်းသိန်းချီ သေရစရာမရှိပါဘူး။ ကိုရီးယားကိုကြည့်ပါ။ အမေရိကနဲ့ တစ်ချိန်ထဲ First case တွေ့တာပါ။ အခုထိ ကိုရီးယားမှာ လူ ၂၈၀၀ လောက်ဘဲသေ ပါသေးတယ်။ အမေရိကမှာ လူပေါင်း ၂၂၈၀၀၀ ​ကျော်သေပြီးသွားပါပြီ။ ဘယ်သူ့ကိုမှ လက်ညိုးထို အပြစ်တင်လို့ မရပါဘူး။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အာဏာအရှိဆုံး ရာထူးကို ယူထားတဲ့ သမ္မတ ထရမ့်မှာ တာဝန်အပြည့်အဝရှိပါတယ်။
Posted in World NewsTagged ဂြိုးဘိုငျဒငျ, သမ်မတ Trump, အမရေိကနျ ရှေးကောကျပှဲ, အမရေိကနျပွညျထောငျစု
Previous post SKYNET မရှိသူမြား ဖုနျးဖွငျ့ အောငျလ ပှဲ ကွညျ့ခငျြသူမြား အတှကျ အမြားသိအောငျ မြှဝပေေး လိုကျကွ ပါ ဦး ဗြာ
Next post အောငျလ ကွီးကို လိုငျးပျေါကနေ တိုကျရိုကျအားပေးလိုကျကွရအောငျဗြာ….တိုကျရိုကျလငျ့တှစေုစညျးပေးလိုကျပါတယျ